Chrome OS 74 inosvika iine mubatanidzwa wekutsvaga mubatsiri uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura Google yaita chiziviso chepamutemo chekuburitswa kwe iyo vhezheni itsva Chrome OS 74, iri vhezheni iyi nyowanie inomira pakuuya kwekutsigirwa kwekuburitswa kwemazwi muLinux application pamwe ne USB kamera rutsigiro rweiyo Android kamera application uye nezvimwe zvakawanda.
Kune uyo ari Ivo vachiri vasingazive nezve Chrome OS, tinogona kuvaudza kuti iyi ndiyo sisitimu ine nharaunda yemushandisi iyo inogumira kune webhu browser. uye pachinzvimbo chemapurogiramu akajairwa, ino sisitimu inoshandisa mawebhu webhu (webapps), zvisinei, Chrome OS inosanganisira yakazara-inoratidzirwa yakawanda-mawindo interface, desktop uye taskbar.
Chrome OS se yakavakirwa pane yakavhurwa sosi Chromium OS chirongwa, iyo, kusiyana neChannel OS, inogona kuverengerwa kubva kukodhi yekodhi kodhi.
1 Main nyowani maficha mu Chrome OS 74
2 Ungawana sei iyi nyowani vhezheni ye Chrome OS 74?
Main nyowani maficha mu Chrome OS 74
Imwe yemabhuku makuru eiyi nyowani yekuburitswa kwe Chrome OS 74 ndiye "Google Mubatsiri" kubva pane yakasarudzika sevhisi rinova rakabatanidzwa basa nekutsvaga.
Zvikumbiro zvakajairika zvine chekuita nekutsvaga yeruzivo izvo zvino zvinoratidzwa zvakananga mubrowser hwindo uye yakasarudzika mameseji akadai sekufungidzira kwemamiriro ekunze uye system rubatsiro zvikumbiro zvinoratidzwa pane chikuru Chrome OS interface mune rakasiyana hwindo.
Zvakare mukati meimwe yedzakakosha shanduko, kunyanya kana iwe ukashandisa linux kunyorera mu Chrome OS, ndizvo izvo zvino mu Iyi vhezheni itsva ye Chrome OS 74 inogona kuburitsa odhiyo.
Icho chiri chakakosha chikamu chekushandisa kwakawanda mafomu. Vashandisi veapps yeApple vanozofarawo kuziva kuti Google's smartphone inoshanda system kamera ikozvino inotsigira makamera eUSB, zvinyorwa zvekuongorora zvinyorwa uye maikorosikopu emagetsi.
Chimwe chakakosha chinosimbisa pakuburitswa uku ndiko kuwedzerwa kwe tsigiro yezvidimbu zvePDF mune muoni wePDF inova chikamu cheiyo Chrome bhurawuza, pamusoro pezvishandiso zvakatsanangurwa zvinobvumidza mavara akasiyana kuratidza nzvimbo mune zvinyorwa.
Kune rimwe divi isu tinowanawo akareruka kufamba kuburikidza neyekutsvaga nhoroondo. Iye mushandisi ikozvino anokwanisa kuwana yapfuura mibvunzo uye achangobva kushandisa maapplication pasina kutanga kupinda mukati mekero bar, asi nekungofambisa iyo cursor kana kubaya pane yekutsvaga bar.
De dzimwe shanduko dzinomira mune iyi nyowani vhezheni ye Chrome OS 74 tinowana:
Iko kugona kuisa chero mafaera uye madhairekitori mune midzi chikamu che "My Mafaira" yakawedzerwa kune iyo maneja maneja, isina kuganhurirwa kune "Dhawunirodhi" dhairekitori.
Kune vagadziri, unogona kutarisa matanda pane ChromeVox screen muverengi.
Wakawedzera kugona kuendesa ruzivo rwekuita kwesisitimu sechikamu chekuzivisa ne telemetry.
Tsigiro yevashandisi vanoongororwa yabviswa (chimiro chakambodzorwa).
Inogoneswa muLinux kernel uye inobatanidzwa mune LSM's SafeSetID module, iyo inobvumidza masisitimu masevhisi kuchengetedza zvakachengeteka vashandisi pasina kukwidziridza rombo (CAP_SETUID) uye pasina kuwana midzi irombo.
Ropafadzo dzinopihwa nekutsanangura mitemo mumasecurityfs zvichibva pane chena runyorwa rwezvisungo zvinoshanda (muchimiro che "UID: UID").
SafeSetID LSM yakawedzerwa kuChannel OS uye neLinux kernel. Iyo inobvumidza sisitimu masevhisi kuchengetedza zvakachengeteka vashandisi pasi pekuti zvirongwa zvavo zvinomhanya pasina kuda simba rine simba rehurongwa. Izvi zvinovandudza chengetedzo kana paine kushomeka muhurongwa hwebasa iro rinogona kushandiswa.
Ungawana sei iyi nyowani vhezheni ye Chrome OS 74?
Iyi nyowani Nyowani ye Chrome OS 74 ichatanga nhasi kuwanikwa kune mazhinji maChannelbook.
Kunyangwe vamwe vagadziri vakagadzira zvisina kujairika vhezheni zvemakomputa akajairwa ane x86, x86_64 uye maARM processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome OS 74 inosvika iine mubatanidzwa wekutsvaga mubatsiri uye nezvimwe
Julian Assange, akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi neimwe nemaBritish